[ June 19, 2021 ] यति धेरै राहात सहित जिग्रि र सिते बा पुगे सिन्धुपाल्चोक ,यस्तो छ अहिलेको अवस्था (हे’र्नुहोस् भिडियो ) समाचार
[ June 19, 2021 ] बेहुलि हुँदा निशा घिमिरे यसरी सजिएकी थिइन्,आहा कति राम्रि (हे’र्नुहोस् भिडियो) समाचार
Homeसमाचारमुलुकभर ७ हजार ३६८ जना नयाँ कोरोना सं’क्रमित थपिए, १४५ को मृ’त्यु
May 16, 2021 admin समाचार 989
नेपालमा पछिल्लो समय दिनप्रति दिन को’रोना संक्रमि’तहरू तीब्र रुपमा बढिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा’लयका अनुसार मुलुकभर प’छिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ३६८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा मु’लुकभर १ सय ४५ जना कोरोना संक्रमित’हरुको मृ’त्यु भएको छ, भने ६ हजार ६४८ जना संक्रमि’तहरु कोरोनामुक्त भएर घर फर्कि’एका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्, जेठ २ भन्दा पहिलेकै अवस्था’मा फर्कनका लागि १० सदस्यीय कार्य’दल गठन गरिएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा अध्यक्ष एवं प्रधान’मन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग १० सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमतीपछि बाहिरिएका उनले सञ्चारकर्मीसँग जेठ २ भन्दा अघिकै अवस्थामा फर्किन का’र्यदल गठन गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘जेठ २ भन्दा पहिलो’को अवस्थामा फर्किने गरी अरु सबै कुरा टुंगो ल’गाउनका लागि वार्ता टोली बनाइएको छ । मैले तीन दिन भनेको छु, अलि समय ब’ढाउँ भन्ने भएको छ ।’
जेठ २ मा के छ ?
२०७५ जेठ २ एकता घोषणा’पूर्वको समय हो । त्यस अवधिमा एमालेको सांग’ठनिक संरचना २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको छ । जसअन्तर्गत २३ सदस्यीय पोलिटब्युरो, ४ जना उपाध्यक्ष, ५ जना सचिव र २ जना बरिष्ठ नेतासहितको पदा’धिकारी रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला र पालिका’स्तरका एमालेका साविकका कमिटीहरु पनि रहेका छन् ।
तर, २०७७ फागुन २३ मा सर्वो’च्चले नेकपालाई वैधता नदिई जेठ २ मा फ’र्काएको थियो । यसबीचमा ओली र नेपाल पक्षबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओली’ले फागुन २८ गते आफ्नो समूहका केही सदस्य’लाई बालुवाटारमा बोलाएर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गरिदिनुभयो । नेकपा माओ’वादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री रामबहादुर बादलसहि’तको टिमलाई पनि स्थायन दिइयो ।
त्यसपछि नेपा’ल समूह ओलीविरुद्ध झन् उत्रिदै आए’को थयो । र, उक्त निर्णयहरु खारेज गरेर जेठ २ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बटमलाइनसहित नेपाल पक्ष ओलीसँग आफ्नो अडान यथा’वत् राख्दै आएको थियो । न्युज24 नेपालबाट
September 11, 2020 admin समाचार 9418
मानिसहरु स्वस्थ तथा तन्दु’रुस्त हुनको लागि उसमा रोग प्रधिरोधी क्षमता बलियो हुनु आ’वश्यक छ । यसका लागि सवै’भन्दा पहिलो कुरा हामीले खान’पानमा ध्यान दिनुपर्छ । खानपानसँगै स्टा’मिना बलियो बनाउन विभिन्न उपायहरु समेत अपनाउन सकिन्छ ।
February 27, 2021 admin समाचार 2591
April 11, 2021 admin समाचार 1612
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (193271)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (185880)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (185397)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (185336)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (183514)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (183283)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (181849)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (180942)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (174548)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151142)